‘भुइँमान्छे’: रमेश र सिपोराको प्रेमलाई छेकेन उमेरले ! (भिडियो) | THE CINEMA TIMES
NepalNews Author:	The Cinema Times - Jul 10, 2017
‘भुइँमान्छे’: रमेश र सिपोराको प्रेमलाई छेकेन उमेरले ! (भिडियो)
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । भदौ २ मा रिलिज हुने सिनेमा ‘भुइँमान्छे’को पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । ‘जिन्दगी एउटा गीत हो…’ बोलको गीतमा सिनेमाका मुख्य कलाकार रमेश बुढाथोकी र सिपोरा गुरुङको प्रेमलाई देखाउँन खोजिएको छ ।
उमेरमा रमेश सिपोराका बुबा सरह छन् । तर, सिपोरालाई मनमनै माया गर्छन । भिडियो हेर्दा लाग्छ सिपोराले रमेशलाई साथिको रुपमा हेर्छिन् । साथि र एक तर्फी प्रेमीको द्वन्दलाई गीतको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । पोस्टमार्टमका लागि लास चिर्ने मान्छेको मनोविज्ञानमा आधारित सिनेमामा रमेशले उक्त भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
अर्जुन पोखरेलको संगीत, दयाराम पाण्डेको शब्द समावेश गीतमा प्रमोद खरेलले स्वर दिएका छन् । नवराज बुढाथोकी निर्देशित सिनेमामा रमेश र सिपोरासँगै सहिन प्रजापति, रामबाबु रेग्मी, बादल भट्ट, रोहिणी भट्टराई, सानु ताम्राकार लगायतका कलाकार अभिनय छ । सिनेमालाई निरुपा राज्यलक्ष्मी थापा निर्माण गरेकी हुन् ।
Tags:ramesh budhathoki, sipora gurung
‘भुइँमान्छे’: रमेश र सिपोराको प्रेमलाई छेकेन उमेरले ! (भिडियो)0out of5based on0ratings.0user reviews.
सकियो ‘प्रेमगीत २’को मोफसल दौडाह
भारतीय भेट्रान अभिनेत्री सुस्मिता सन्यालको निधन !
Events	Jul 23, 2017
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । सिनेमा ‘भुइँमान्छे’ र सिने पत्रकारहरुको मैत्रीपूर्ण भलिवल खेल सकिएको छ ।…
Nepal	Jul 19, 2017
‘भुइँमान्छे’ नयाँ गीतमा मुख्य कलाकारको पिडा (भिडियो)
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । भदौ २ गते प्रदर्शनमा आउँन लागेको सिनेमा ‘भुइँमान्छे’को दोस्रो गीत…
News	Jun 4, 2017
शव पोस्टमार्टम गर्ने मानिसको कथामा ‘भूईँमान्छे’ (टिजर)
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । शव पोस्टमार्टम गर्ने मानिसको मनोविज्ञानमा आधारित रहेर निर्माण गरिएको सिनेमा…